Amazon Smile: Ahoana ny fametrahana sy fanomezana amin'ny Element izay tsy misy vidiny ho anao!
Ahoana ny fametrahana Amazon Smile smile.amazon.co.uk
AmazonSmile dia ny sampan-draharaha ara-barotra amin'ny Amazon izay mamela ny mpanjifa mamorona fanomezana ho an'ny fiantrana isaky ny mividy Amazon (raha mampiasa Amazon Smile).
Ireo fanomezana ireo dia mety ho toa kely ihany fa manampy izy ireo. Ny £ 25 dia mamela ny Elector hanolotra mpiompy amin'ny iray amin'ny fandaharantsika ho an'ny tanora iray mijaly noho ny fahasarotana.
Isaky ny mividy mpanjifa smile.amazon.co.uk Amazon dia hanome vola isan-jato amin'ny vidin'ny fandoavam-bola an-tapitrisany amin'ny vokatra azo ekena. Tsy misy sarany na entim-bola fanampiny amin'ny mpanjifa na ny fiantrana!
Aza adino ny misafidy ny Fikambanana Elector alohan'ny hanombohana ny fividianana!
1. Araho ity rohy ity mba hahitana ny Society Society ao amin'ny AmazonSmile https://smile.amazon.co.uk/gp/chpf/homepage/ref=smi_se_scyc_srch_stsr?q=element+society
2. Tsindrio ny Select
Mba hahafantarana bebe kokoa ny fomba hafa hanohanana ny asan'ny Society Society kitiho eto.